Cinezela ividiyo: kutheni uyenza kunye neenkqubo zokunciphisa ubungakanani | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 15/06/2021 08:52 | Amaqhinga
Xa into icinezelwe, ihlala ilahla ubume bayo kwaye ivele kumgangatho osezantsi kunokuba umntu elindele. Xa kuziwa ekucinezeleni ividiyo, oku kuhlala kuyenzeka, kwaye kukuba umgangatho ulahlekile ngenxa yesisindo esincinci. Kodwa uza kuthini xa sisixelela ukuba ungayicinezela ividiyo ngaphandle kokulahleka komgangatho?
Ukuba kufuneka thumela ividiyo enzima kakhulu kwaye kufuneka uyicinezele, kodwa gcina umgangatho emfanekisweni, emva koko oku kukunika umdla kuba kukho iinkqubo ezininzi eziza kukunceda ugcine amaxabiso abalulekileyo kodwa ube nesisindo sokuthumela. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani?
1 Cinezela ividiyo kwaye ungalahli umgangatho, ngaba kunokwenzeka?
2 Iinkqubo zokucinezela ividiyo esemgangathweni
2.1 Cinezela ividiyo: I-HandBrake
2.2 Umguquli weVidiyo kaMovavi
2.3 Cinezela ividiyo: VLC
2.4 Isiguquli simahla seVidiyo yeHD
2.5 Ukwenza ngokukhululekileyo
3 Ngaba akhona amaphepha ewebhu anokuguqula ividiyo?
Cinezela ividiyo kwaye ungalahli umgangatho, ngaba kunokwenzeka?
Ngokwenyani, awunakufumana yonke into. Oko kukuthi, awunakucofa ividiyo kwaye ayilahli umgangatho. Kodwa yintoni esemandleni akho kukuba, xa unciphisa ubunzima bale fayile, umgangatho owehlisiweyo awuncinci, ngendlela eza kuqhubeka iphakama, kodwa ingangathi yeyokuqala.
Qaphela oko, xa unciphisa ubungakanani bevidiyo, into eyenzayo kukususa idatha kule vidiyo, njengeqondo ledatha, i-bitrate ... kwaye konke oko kuya kuba kukubi ukuba ividiyo ibonwe ngomgangatho ophezulu. Ayinakuphepheka.
Ngoku, oko akuthethi ukuba uza kuba neziphumo ezoyikisayo, ukuba ipikseliwe, iyayeka, ayikhangeleki ilungile ... Kukho iinkqubo ezinokukunceda ukuba ucinezele ividiyo ngaphandle kokuba loo lahleko iqatshelwe. Ukuba ikhona, iyakubakho, kodwa inokubonakala kancinci kwabanye.
Iinkqubo zokucinezela ividiyo esemgangathweni
Ngaphambi kokuba uqhubeke uthethe ngeenkqubo ezahlukeneyo onokuzisebenzisa ukucinezela ividiyo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba, ukuba usebenzisa amaphepha akwi-Intanethi apho bacela ukuba ulayishe ividiyo, awuyazi ngokuqinisekileyo into abaya kuyo yenza nayo kuba baya kuyisingatha kwiiseva zabo kwaye awusayi kulawula ukusetyenziswa kwabo. Nangona ngesiqhelo kungenzeki nto, oko akuthethi ukuba awuyikhuseli indalo yakho ke siyacebisa ukuba, nanini na unakho, sebenzisa iinkqubo ezikwikhompyuter yakho (nangona oko kuthetha ukuyifaka kunye nokuchitha indawo kuyo).
Oko kwathiwa, iinkqubo esizicebisayo zezi zilandelayo:
Cinezela ividiyo: I-HandBrake
I-HandBrake yinkqubo eyaziwayo yokuhlela ividiyo. Kwaye kungenxa yokuba ikuvumela ukuba uyifake kwiWindows, iLinux kunye neMac, ebonelela ngokwahluka ekusebenziseni kwayo.
Ngokumalunga nenkqubo kunye nezinto ezisixhalabisayo, unako ukunciphisa ubunzima beevidiyo ngaphandle kokuphulukana nomgangatho kwaye ikuvumela ukuba ulawule iiparameter zevidiyo Isisombululo, isantya sebhithi, susa ii-track zomsindo, ikhowudi yevidiyo ...
Kwaye okona kungcono, simahla. Ukungena kwiwebhusayithi yayo unokufumana ukhuphelo ngokuxhomekeke kwinkqubo yakho yokusebenza.
Umguquli weVidiyo kaMovavi
Kule meko, le yenye yeenkqubo zokuguqula ividiyo ezaziwa kakhulu. Ngaphandle kokusebenzela ukunyanzela, ungayisebenzisa kwezinye izinto ezininzi njengokutshintsha ifomathi, ukusebenza nge4K, njl.
Unengxaki enye kuphela kwaye yile akukho 100% simahla. Inenguqulo encinci kodwa ukuba ufuna ukuba nawo onke amathuba xa usebenza nayo uyakufuna ingxelo ehlawulelweyo. Kwaye enye into, ifumaneka kuphela kwiWindows nakwiMac.
Cinezela ividiyo: VLC
Ngokuqinisekileyo le nkqubo ivakala kakhulu kuwe. IVLC yenye yeenkqubo zokudlala iividiyo ezaziwayo kwihlabathi liphela. Kodwa into engaziwayo ngabantu abaninzi kukuba unakho ukucinezela ividiyo.
Ukwenza oku, kukuvumela ukuba ukhethe kungekuphela into ofuna ukuyicinezela kodwa ukuba ungayenza njani kwaye yeyiphi ifomathi yemveliso onokuyinika yona.
Into elungileyo kukuba, xa kufikwa ekucinezeleni ividiyo, ilahleko esemgangathweni incinci kule nkqubo.
Isiguquli simahla seVidiyo yeHD
Ukuba ujonga isixhobo esilula sokucinezela ividiyo kwaye engayitshisi intloko yakho kakhulu, unale. Kuvela kuphela kwiWindows kwaye nje ukuba uyifake unganciphisa ubungakanani beevidiyo ozifunayo ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho. Ngapha koko, isebenza phantse ngokungathandabuzekiyo kuba uya kuba nebha apho uthatha isigqibo sokuba ufuna ukunciphisa umgangatho kangakanani kwaye ufuna uxinzelelo olungakanani.
Inyani yile yokuba ayilungelanga enye into, ke ndiyatya Inkqubo ekhethekileyo yalo msebenzi intle kakhulu. Icala elisezantsi esilibonayo kukuba kuphela kwenkqubo enye yokusebenza.
Le nkqubo ye-Windows kuphela, kodwa ithandwa kakhulu. Ingasetyenziswa ngeWindows Vista, 7, 8, 8.1 kunye neeWindows 10. Ikuvumela ukuba wenze ntoni? Ewe, ukongeza kwingcinezelo yevidiyo, ineminye imisebenzi kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba uhlobo lwasimahla luya kongeza ii-watermark kwividiyo, ke, ukuba awufuni ukuba yenzeke, uyayithenga, okanye uye kolunye ukhetho.
Xa kuziwa ekucinezeleni inkqubo, ikuvumela ukuba uyigcine ngokusekwe kumgangatho owufunayo, ukutshintsha iiparameter ezinjengevidiyo kunye nekhowudi yeaudiyo, inqanaba lesakhelo, inqanaba lesuntswana, njl. Uya kuphulukana nomgangatho, kodwa uya kulawula ukuba ungakanani.
Mhlawumbi ngomnye wabahleli bevidiyo ababalaseleyo emhlabeni. Ngayo unako cut, create, mount ... any video, kwaye omnye wemisebenzi yayo kukucinezela ividiyo. Yenza oku ngokunciphisa isisombululo sevidiyo, kodwa unokuguqula ezinye iiparameter ezinje ngesakhelo ngomzuzwana okanye inqanaba lesalathiso. Iya kukuvumela ukuba usike iinxalenye zevidiyo ezingasebenziyo.
Uneenguqulelo ezimbini, eyasimahla, ethi, njengeFreemake, yongeza ii-watermark, okanye ingxelo ehlawulelweyo.
Ngaba akhona amaphepha ewebhu anokuguqula ividiyo?
Ngoku sithethile nawe malunga neenkqubo, unokukhetha into ngokukhawuleza. Kukho: ngamaphepha ewebhu apho kufuneka ulayishe iividiyo kuphela kwaye uchaze iiparameter ukuze kwimizuzu ube nevidiyo entsha esele icinezelwe kwaye inobunzima obuncinci.
Ukuba awukhathazeki malunga noko sikuxelele kona malunga nokuphulukana nolawulo lwevidiyo, unayo njengokukhetha la maphepha:
Ngoku kukuwe ukuba uthathe isigqibo malunga nokuba ufuna ukucofa ividiyo kunye nayo, nokuba uneenkqubo ezikwikhompyuter yakho okanye kwiiwebhusayithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Cinezela ividiyo